कोरोना भाइरस: सङ्क्रमणबाट जोगिन कस्तो मास्क कसरी लगाउने ? – Jagaran Nepal
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन लकडाउनमा बस्नु सबैभन्दा प्रभावकारी ठानिएका बेला मास्कको प्रयोगमा पनि विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। तर त्यसको सही प्रयोग र सही छनोट महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।
थुकको छिटाको जोखिम: मास्कको प्रयोग नयाँ अभ्यास होइन। तर कोभिड-१९ को महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्थामा लगभग सबैले मास्कको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. विनोदबिन्दु शर्मा मास्क व्यक्तिगत सुरक्षाको भरपर्दो साधन बनेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “अहिलेको सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सुरुका दिनमा मास्क लगाउन त्यति प्रोत्साहित गरेका थिएनौँ, तर अहिले मास्क अत्यावश्यकीय साधन बनेको देखिएको छ। त्यसले थुकका छिटाहरूबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणको जोखिमलाइ कम गराउँछ।” बजारमा सामान्य कपडाबाट तयार गरिकादेखि गुणस्तरीय गरी सामान्य तया तीनथरी मास्क पाइन्छन्।
कस्तो मास्क लगाउने? कस्तो मास्क प्रयोग गर्ने भन्नेमा सर्वसाधारणमा अन्योल पाइन्छ। डा. शर्मा सर्वसाधारणलाई सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन्। उनी बजारका पाइने कपडाबाट बनाइएका मास्क प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दैनन्।
कसरी लगाउने, कसरी फुकाल्ने? मास्क लगाएर मात्र हुँदैन त्यो लगाउँदा र फुकाल्दा पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक नवराज शर्माको छ।